Ejypta – Fihaonana an-tampon’ny Comesa: hanohana ny PEM ireo nihaona tamin’ny filoha Rajoelina | NewsMada
Ejypta – Fihaonana an-tampon’ny Comesa: hanohana ny PEM ireo nihaona tamin’ny filoha Rajoelina
Nihaona amin’ireo mpiara-miombona antoka sy tompon’andraikitra samihafa eo anivon’ireo mpikamban’ny Comesa ny filoha Rajoelina Andry, omaly tany Egypta. Tafiditra amin’ny fitadiavana fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny « Plan Émergence Madagascar – PEM” izany. Naneho fahavononana ho amin’izany fiaraha-miasa izany ireo nihaona tamin’ny filoha. Hanamarika ny fihaonana, hanomboka anio ny fifamindram-pitantanana eo amin’ny filoha Rajoelina, nitantana ny fivoriamben’ireo filoham-panjakana sy ireo lehiben’ny governemanta eo anivon’ny Comesa sy ny filoha egyptianina, Abdel Fattah El-Sisi. Tanterahina ao anatin’ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izao fihaonana izao ka hisy ireo filoham-panjakana, tsy hiatrika izany mivantana fa hanatrika ny fivoriana amin’ny alalan’ny “visioconférence”.
Hiompana amin’ny fanamafisana ny fahafahana miarina amin’ny alalan’ny fampiasana ny fisokafana ara-toekarena sy ny fampiasana ny nomerika ary stratejika ny lohahevitra hodinihina mandritra izao fihaonana an-tampony faha-21 izao.
Miara-dia amin’ny filoha any an-toerana ny minisitry ny Varotra, Razafindravahy Edgard ary efa nialoha lalana azy ireo ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Rajoelina Patrick. Efa niatrika ny fivoriana fanomanana, natrehan’ireo minisitra sy tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny lehiben’ny diplaomasia.
Tsiahivina fa natao ny volana jolay 2018 tany Lusaka Zambia ny fivoriana an-tampony farany notanterahin’ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ao amin’ny Comesa.